हृदयघातको खतराबाट बच्नका लागी दैनिक रूपमा याे खानेकुरा खानुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
गर्मी सुरु भएसंगै हामीले आफ्नो खानेकुरामा बिशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । त्यसैले शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि दहीको सेवन निकैमहत्वपूर्ण हुन्छ ।यसले शरीरको पाचन क्रियालाई मद्दत गर्नुका साथै बिभिन्न किसमका रोग संग लड्ने क्षमताको बिकास गर्न मद्दत गर्छ ।
दिनहु खानामा दुइ चम्चा दही सामेल गर्नाले ब्लडप्रेसर नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ र हृदयघात हुनबाट बचाउछ । दहीले शरीरबाट कोलेस्टेरोलरको मात्रा घटाउने काम गर्छ । यसले तपाईंको मुटुलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
अमेरिकन जरनल ऑफ हाइपरटेंशन मा प्रकाशित स्टडीका अनुसार व्यक्ति स्वास्थ्य रहनका लगि दही एक उत्तम पदार्थ साबित भएको थियो ।त्यसैले दहीको सेवन गर्नाले हृदयघातको खतराबाट पनि बच्न सकिन्छ।
रोग प्रतिरोधक क्षमताको लागि दही
मानिसले खानमा दहीको उपयोग कम्तीमा ४ हजार पाँच सय वर्षदेखि गरिरहेका छन् । सानो बच्चादेखि बूढापाकालाई समेत दही सजिलै पच्छ । दही खानाले रोग प्रतिरोधक क्षमतासमेत बढ्छ ।
दही जुन ब्याक्टेरियाले बन्छ त्यो शरीरमा भइरहेको कुनै पनि संक्रमणबाट सुरक्षित राख्छ । यो सीधै शरीरमा सेतो रक्त कणिकामा काम गर्छ र शरीरलाई रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएर हुने रोगबाट बचाउँछ । जसलाई दूधबाट एलर्जी हुन्छ, उनीहरू दही सेवन गरेर यसबाट पोषकतत्त्व हासिल गर्न सक्छन् ।
दहीको नियमित सेवन गर्ने व्यक्तिमा गामा इंटरफरान नुन प्रोटिनको मात्रा बढी पाइन्छ जसले यसको रोगप्रतिरोधक क्षमतालाई बढी सुदृढ बनाउँछ । थुप्रै अनुसन्धानहरू अनुसार दहीको नियमित सेवनले थुप्रै क्यान्सर मुख्यत: ठूलो आन्द्रा र कोलोनको क्यान्सरबाट सुरक्षा दिन्छ ।
दहीको सबैभन्दा ठूलो विशेषता यसमा लैक्टिक अम्ल बढी मात्रामा हुनु हो । यसले गर्दा ठूलो आन्द्रामा यस्तो वातावरण बन्छ जो दुर्गन्ध उत्पन्न गर्ने जीवाणु अर्थात् फुटरे फेक्टिभ ब्याक्टेरियाको विकासलाई रोक्छ । यो जीवाणुलाई बी कोली को नाउले समेत जानिन्छ ।
अर्थात् ठूलो आन्द्रामा जीवाणुको सन्तुलन बनाइराख्न दहीको नियमित सेवन गर्नुपर्छ । दूधमा लैक्टोज पाइन्छ तर दहीमा ल्याक्टेज हुन्छ जो सजिलै पच्नुको साथै पेटलाई समेत आराम दिन्छ । दहीमा मिनरल्स र क्याल्सियम धेरै बढी मात्रामा हुन्छ ।
आस्टियोपोरोसिसले ग्रस्त रोगीलाई दही खाने सल्लाह दिइन्छ । दहीमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र क्याल्सियम बढी मात्रामा पाइन्छ यसैले हाई कोलेस्ट्रोलको रोगीको लागि पनि यो फायदाकारी छ । यसमा भिटामिन बी ६ र भिटामिन बी १२ समेत पाइन्छ ।
प्रोबायोटिक आहार अर्थात् दहीलाई एलर्जी रोकथामको लागि समेत उपयोग गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ । वैज्ञानिक रोजर काजको अनुसार जुन व्यक्तिको परिवारमा एलर्जीको समस्या छ, उनीहरू यो प्रोबायोटिक अर्थात् दहीलाई रोकथामको रूपमा उपयोग गर्न सक्छन् । प्रोबायोटिक आहार अति लाभप्रद अति सूक्ष्म जीवाणु वा खमिरले युक्त हुन्छन् ।
दहीले स्वस्थ जीवन मात्र दिँदैन यो सौन्दर्य बढाउनसमेत सहयोगी हुन्छ । दही कपालमा लगाउँदा यसले चायाबाट समेत मुक्ति दिलाउँछ । यस्तै अनुहारमा लगाउँदा छाला टल्किन्छ । घामले डढेको छालामा दही लगाउनु फाइदा पुर्‍याउँछ ।
आहारमा नियमित रूपले दहीको सेवन गर्नाले बच्चामा दन्तक्षयको सम्भावना २२ प्रतिशत कम हुने समेत एउटा अध्ययनले देखाएको छ । सातामा चारपटक दही खाने बच्चामा दन्तक्षयको सम्भावना २२ प्रतिशत कमी देखिएको हो ।
उक्त अध्ययन फुकुओका र टोक्यो विश्वविद्यालयका विशेषज्ञहरूले गरेका थिए । उनीहरूले दही दाँतमा सुरक्षात्मक प्रोटिनजस्तै काम गर्ने र हानिकारक एसिडबाट दाँतको रक्षा गर्ने पाए । यो अनुसन्धानलाई अस्ट्रलियाई वैज्ञानिकहरूले समेत सहयोग गरेका थिए ।
एक कप दहीमा करिब तीन सय ७० मिलिग्राम क्याल्सियम हुन्छ जो एक व्यक्तिका लागि दैनिक आवश्यक क्याल्सियम मात्राको ३० देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हो । यसमा प्रोटिनसमेत प्रशस्त हुन्छ ।
एक कपले एकजनालाई दैनिक आवश्यक पर्ने २५ देखि ३० प्रतिशत प्रोटिनको आवश्यकतासमेत पूर्ति गर्छ । एक कपमा दुई सय ५० मिलिग्राम पोटासियमसमेत हुन्छ जो एउटा केरामा पाइने पोटासियमको बराबर हो । यसमा कम क्यालोरी हुन्छ जसले यो पोषक आहारको क्षेत्रमा डाइट फुडको रूपमा समेत प्रसिद्ध छ ।
दही खान नजान्दा बिष पनि बन्न सक्छ ! दही कहिले र कसरी खाने ?
दही सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा अनेक लाभ मिल्छ । तर, दही खाने समय र तरिकामा भने ख्याल गर्नुपर्छ । किनभने दही गुणकारी हुँदाहुँदै पनि यसको सेवन गर्ने विधि र समय थाहा नहुँदा यो विषाक्त बन्न पुग्छ ।
दही स्वाद र स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, सौन्दर्यका लागि पनि उत्तिकै उपयोगी मानिन्छ । दहीमा केहि यस्ता तत्व हुन्छ, जसले पाचन क्रियालाई चुस्त राख्न सहयोग गर्छ ।
दही राती सेवन गर्नु हुँदैन । किन ?
– राति दही खाँदा पाचन क्रियामा गडबडी पैदा हुन्छ । यसलाई पचाउनका लागि इनर्जी बर्न गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । धेरै मानिसहरु राति खाएपछि सुतिहाल्छन् । यसले झन् समस्या हुन्छ ।
– राति दही सेवन गर्दा शरीरमा इन्फेक्सनको डर हुन्छ । यसले रुघा र खोकी लाग्न सक्छ ।
यसका साथै कतिपय अवस्थामा दही हानिकारक हुनसक्छ । वा त्यसले पोषण होइन, विषको काम गर्न सक्छ । जस्तो कि,
–शरीरको कुनै भाग सुन्निएको छ भने राति दही कदापि खानु हुँदैन । यसले सुन्निएको झन् बढ्छ ।
–घुँडा वा जोर्नीको दुखाईबाट पिडित भएको अवस्थामा दही सेवन उपयोगी हुँदैन । अन्यथा यसले दुखाईलाई झनै बढाउनेछ ।
–हामी दहीमा विभिन्न मिश्रण बनाएर सेवन गर्छौं, खासगरी डिजर्टको रुपमा । तर, थरीथरीका फलफूल दहीमा मिसाउँदा त्यो विषाक्त बन्न सक्छ ।
दही कहिले, किन र कसरी खाने ?
दही खाने उपयुक्त समय विहान हो । हात–गोडाको जलन, पेटको इन्फेक्सन, अपच, भोक नलाग्नु, कमजोरीका साथै अरु पनि थुप्रै समस्याहरु बिहान दही सेवन गर्दा ठीक हुन्छ । नास्तामा एक कचौरा दहीमा सख्खर मिलाएर खाँदा शरीरमा रगत बढ्छ ।
यसमा यस्ता रसायनिक पदार्थ हुन्छन् जसले गर्दा यो दूधभन्दा चाँडै पच्छ पनि । अपच, कब्जियत, ग्यास जस्ता पेटको समस्या भोगिरहेका व्यक्तिलाई दही वा त्यसबाट बनेको लस्सी, मोही आदिको उपयोग गर्नु फाइदाजनक हुन्छ ।
दही खाँदाका फाइदा
–दहीको नियमित सेवन शरीरका लागि अमृत समान मानिन्छ । यसले रगतको कमि तथा कमजोरी हटाउँछ । दूधले जब दहीको रुप लिन्छ, यसको सुगर एसिडमा बदलिन्छ । यसबाट पाचनमा मद्दत मिल्छ । भोक कम लाग्ने व्यक्तिहरुलाई दहीले एकदम फाइदा गर्छ ।
–दहीको मोही वा लस्सी बनाएर पिउँदा पेटको गर्मी शान्त हुन्छ । पेटमा गडबडी हुँदा दहीमा बिरे नुन हालेर खाँदा पनि फाइदा हुन्छ ।
–अमेरिकी आहार विशेषज्ञहरुका अनुसार दहीको नियमित सेवन गर्दा आन्द्राको रोग तथा पेट सम्वन्धी रोगहरुबाट छुट्कारा मिल्छ ।
–दहीमा मुटुको रोग, उच्च रक्तचाप, तथा गुदाको रोगहरुलाई बिसेक पार्ने गजबको क्षमता हुन्छ । यसले कोलस्ट्रोल बढ्नबाट रोक्छ र मुटुको धड्कनलाई ठीक राख्छ ।
–दहीमा क्याल्सियम अधिक मात्रामा पाइन्छ । यो हड्डीहरुको विकासमा सहायक हुन्छ । साथै, दाँत, ता नङलाई पनि बलियो बनाउँछ ।
–पायल्स रोगबाट पिडित व्यक्तिहरुले दिउसो भोजनपछि एक गिलास मोही पिउँदा फाइदा मिल्छ ।
Don't Miss it पनिर चिल्ली खान मन छ तर बनाउन आउँदैन ? यसो गर्नुहोस
Up Next मानव शरीरका २२ रोचक तत्थ्यहरु यसप्रकार रहेका छन्, जान्नुहास्
खानेकुरा अनियन्त्रित रुपमा खानुको बेफाइदा, यस्ता छन्
तौल बढ्छ बढी खानेकुरा खाँदा अनावश्यक रुपमा तौल बढ्छ । मानिस सानो उमेरमै मोटोपनको सिकार बन्छ । मोटोपनका कारण डायबिटिज,…
तपाईं घन्टौं फोनमा कुरा गर्नुहुन्छ वा एयरफोन लगाएर चर्को आवाजमा गीत सुन्नुहुन्छ? बेलैमा सचेत हुनुस्, श्रवणशक्ति गुम्ला! यस्तो बानी परेका…
कस्तो स्वभावका मानिसका कुन रक्तसमूह ? जान्नुहोस
एबी समूह सबैभन्दा कम मानिसमा भएको रक्तसमूह एबी हो । यो ४ प्रतिशत मानिसमा मात्र पाइन्छ । ३ प्रतिशतमा पोजेटिभ…
चाणक्य का यी १० जीवन उपयोगी भनाईहरु तपाइलाई थाहा नहुन सक्छ
आचार्य चाणक्य एक येस्ता महान विभूति थे, जसले आफनो विद्वत्ता, बुद्धिमता एबम क्षमता को बल मा भारतीय इतिहास को धारा…
बढ्दो आधुनिकिकरणले जीवनशैली जति सहज बनाएको छ । मानव स्वास्थ्यमा नयाँ समस्या पनि निम्त्याइरहेको पाइएको छ । सन्दर्भः हाई ब्लडप्रेसरको…
कसरी पहिचान गर्ने डिप्रेसन ? यसको कारण र लक्षणहरू के–के हुन् !
डिप्रेसन भनेको खाली मन उदास हुनु मात्र नभइ त्यस भन्दा अझ बढी हो । यो मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदयरोग आदि…